Cayaaraha radiohalgan.com - July 2, 2022 0
Manchester) 02 Luulyo 2022. Sida ay saxaafada Ingiriiska xaqiijisay maanta oo Sabti ah, xiddiga reer Portugal iyo kooxda Manchester United ee Cristiano Ronaldo uu codsaday inuu ka tago garoonka Old Trafford xagaagan. Ronaldo...
DAAWO:- Muqaal” Qaabkii Liverpool uga farxiyey MO SALAH & Saxiixyadii ugu Cuslaa & Chelsea...
Cayaaraha radiohalgan.com - July 1, 2022 0
Daawadayaasheena sharafta leh kusoo dhawaada muuqaal xiiso badan o ku saabsan Update kii ugu dambeeyey ee dunida kubada cagta & wararkii ugu dambeeyey ee caalamka . Qodobada aad ku daawaneysaan waxa kamid...
DEG-DEG: Ajax Oo Arsenal Ka Diiday Dalabkii 2-aad Ee Ay Gunners Ka Gudbisay Lautaro...
Mikel Arteta ayaa xiddiga Lautaro Martinez u calaamasaday xiddig uu doonayo in uu ku xoojiyo kooxdiisa xilli ciyaareedka dambe. Arsenal ayaa xiddiga Lautaro Martinez oo ka ciyaari kara 3 boos horay looga...
Wararkii ugu Dambeeyay Sababtii Ay Chelsea Ugu Fashilantay Saxiixa Richarlison Oo La Ogaaday
Chelsea ayaa weyday saxiixa weeraryahanka Everton Richarlison ka dib markii ay ku guuldareysteen inay la mid noqdaan qiimaha ay Tottenham ka gudbisay saxiixa xiddiga reer Brazil. Xiddiga 25 jirka ah ayaa ku...
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhawdahay in ay Leeds United kala heshiiso saxiixa xiddiga garabka ka ciyaara ee Raphinha sida ay sheegayaan. Saxafiga ku dhaw Barcelona ee Gerard...
Fernandes oo shaaca ka qaaday hammiga Ronaldo ee mustaqbalkiisa Man United
Manchester) 01 Luulyo 2022. Bruno Fernandes ayaa shaaca ka qaaday hamiga uu xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Cristiano Ronaldo ka leeyahay mustaqbalkiisa kooxda Manchester United. Wararka Ingariiska ka imaanaya...
RASMI: Liverpool oo qandaraaska u kordhisay Mohamed Salah
Liverpool) 01 Luulyo 2022. Liverpool ayaa maanta oo jimco si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay qandaraaska u kordhisay xiddigeeda reer Massar ee Mohamed Salah, si uu u sii joogo garoonka Anfield. Salah...
Arsenal oo xaqiijisay in Matteo Guendouzi uu si joogto ah ugu biiray Marseille
London) 01 Luulyo 2022. Bixitaanka Guendouzi ee Arsenal ayaa la xaqiijiyay iyadoo Marseille ay heshiiska ku-dhammaystirtay 10.5 milyan euro. Kooxda Ligue 1 ka dhisan ayaa isticmaashay dookh ay ku iibsan karto xiddiga heerka...
XASAASI: Barcelona Oo Qarka U Saaran In Ay Chelsea Ku Garaacdo Raphinha
Kooxda Barcelona ayaa qarka u saaran in ay chelsea ku garaacdo saxiixa xiddiga Raphinha Iyaga oo diyaar u ah in ay dalab 60 milyan ah ka gudbiyaan saxiixa xiddiga. Chelsea ayaa Leeds...
RASMI: PSG Oo Xaqiijisay Saxiixa Vitinha
Kooxda PSG ayaa si Rasmi ah u shaacisay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Vitinha kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Fc Porto. PSG ayaa xaqiijisay in ay Vitinha ka saxiixatay heshiis...
Dal lix kun oo qof lagu dilay saddexdii bilood ee ugu...